အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: မျက်နှာဖုံးများ ကျွတ်ကျခြင်း
ဒေါ်စုနဲ့ ရှစ်ပူးကို အသေအလဲပုတ်ခတ်ကြတယ်..၊
ဦးရွှေမန်းရဲ့ လေသံ စကြားတဲ့အချိန်မှာ ခဏတန့်သွားတယ်..
တစ်ချို့က စိတ်ထဲမှာ နောင်တတော့ရလောက်ပြီ..
ဒါပေမဲ့ အပြင်မှာ အပိုးမကျိုးချင်သေးဘူး...၊
တကယ် စဆော် မှ အပိုးကျိုးမဲ့ပုံရှိတယ်..၊
တခြားနည်းတွေ (ရှေးနည်းတွေ) ထပ်သုံးလာပြန်တယ်.
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 3:21 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook